Mit Dem Rauchen Aufhören - Man Muss Es Selber Erstmal Wirklich Wollen
Aza mifoka sigara | FAHASALAMANA
Ao anatin'ny dingana 5 hahatongavana tsy mpifoka
Tsy misy fisintomana soritr'aretina ho an'ireo tsy mpifoka
Tsy misy setroka amin'ny alàlan'ny hypnosis
Ahoana no hijanonako tsy mpifoka sigara sy hanoherana fakam-panahy?
Ny mpifoka rehetra dia mahalala fa tsy manao soa amin'ny fahasalamany izy. Na izany aza, fiankinan-doha izany ary sarotra kokoa ny miala noho ny azonao an-tsaina. Fantatrao koa ny homamiadan'ny havokavoka ho toy ny aretina, fa manatratra ilay tapa-kazo mamirapiratra foana ianao. Ny fifohana sigara dia mifandraika amin'ny vidiny lafo be ihany koa. Miakatra saika isan-taona ny vidin-paraky. Izay nanapa-kevitra ny hijanona amin'ny farany dia mila ampahany betsaka amin'ny faharesen-dahatra sy ny finiavana hitazona izany.
Miala amin'ny sigara
Raha te hiala ianao dia tokony harianao avy hatrany ireo sigara sisa tavela. Ny fametrahana fe-potoana toy ny hoe "Hijanona ao anatin'ny 10 andro aho" indrisy fa tsy manampy ary matetika tsy voatazona. Ny fialana manomboka izao dia sarotra nefa tsy azo atao mandritra ny iray na roa andro, fa avy eo manomboka ny fisintahana ny nikôtinina. Efa zatra an'io ny vatana ary mino ny iray fa "tsy afaka miaina" ny vatana raha tsy misy azy. Voaporofo fa ny olona mijanona irery ary tsy misy fanampiana ary manohy manao izany dia manana vintana 6% fotsiny hahombiazana. Tsy azo atao izany raha tsy misy ny fanohanana sy ny safidy hafa.
Atsaharo ny fifohana sigara -
© Dan Race / Adobe Stock
Mety hanampy tokoa ny mampihena ny fihinanana paraky anao hampihena ny vatanao. Na izany aza, io dia antsoina hoe famitahana tena ary maharitra maharitra kokoa ny fiankinan-doha amin'ny saina. Ny olona sasany dia mianiana amin'ny fitsaboana amin'ny vondrona. Ny fandalovana fandaharana fanesorana amin'ny olona mitovy saina dia afaka manome tanjaka sy fanohanana. Mirehareha ny iray rehefa afaka milaza fa tsy may ny sigara.
Ankoatry ny fanesorana ny vondrona, dia atolotra ao amin'ny fivarotam-panafody ihany koa ny fanafody sy ny solon'ny nikôtinina. Tena malaza ny plasters, siligaoma na lozenges. Ny soritr'aretina nisintona dia nanamaivana be. Matetika no ampiasaina ny fomba hafa, toy ny vatomamy. Saingy ny fitomboan'ny lanja dia fisakanana iray hafa izay tsy eken'ny mpifoka firy.
Ny zava-dehibe indrindra rehefa miala dia fianakaviana, namana ary mazava ho azy ny fahasalamanao. Ny tsy mpifoka sigara ao amin'ny faritry ny namana dia mety hisy vokany manohana, satria izy ireo koa dia mafana fo fa tsy ho mpifoka sigara intsony. Ho avy hitsidika matetika kokoa ianao. Mihamahazo vahana kokoa ny fifandraisana ara-tsosialy ary lasa mahaliana kokoa ireo hetsika fialam-boly. Ny vola tokony ho laninao tamin'ny sigara dia tokony hidina anaty boaty vola misaraka. Ho gaga ianao hoe ohatrinona ny miaraka rehefa afaka herinandro vitsivitsy.
Farany, ny fihetsika anaty manoloana ny fifohana sigara no fototry ny raharaha. Raha tsy tianao 100% dia tsy ho vitanao izao. Ny soritr'aretina fisintahana dia maharitra enina herinandro fotsiny. Avy eo dia mahatsapa ho tsara kokoa ianao. Ny tokonam-baravarana dia ny hiampitana ny tahotra ny fisintahana. Raha vantany vao vita io dingana io - irery na miaraka amina vondrona iray - dia lavitra ny dia tsy andehanan'ny setroka amin'ny fiainana.
Sarotra tokoa ny miala amin'ny sigara, fa rehefa ao ny eritreritra, dia tsy ho mafy orina intsony ny finoana sigara. Izay mieritreritra ny hiala amin'ny sigara dia tokony hamaky ireo safidy maro azony atao. Raha vantany vao hitanao ny lalanao dia afaka manomboka avy hatrany ianao. Na izany aza, misy fitsipika fototra vitsivitsy tsy maintsy adino mba tsy hanembantsembanana ny fahombiazana ny famerenana. Betsaka ny olona mijanona tsy mifoka sigara imbetsaka amin'ny fiainany ary miverimberina misintona. Raha mieritreritra foana momba ireo dingana 5 hahatongavana tsy mpifoka ianao dia hataonao izany!
Ny fifandraisana mifangaro misy amin'ny fifohana sigara dia tokony ekena tsara. Misy antony mahatonga anao te hiala amin'ny sigara. Tokony hahafantatra sy hanadihady tsara ny antony manosika anao manokana ianao mba hialana amin'ny sigara.
Ny olona iray dia tokony handinika tsara ny fitondran-tenany mifoka sigara ary hanaiky ny toe-javatra misy ny sigara. Tsy mankaleo ve? Faneren'ny namana ve? Ny toe-po ve? Rahoviana no lasa manokana ny fifohana sigara ary nahoana? Izay manontany sy afaka mamaly ireo fanontaniana ireo dia niaiky ny fombany fifohana sigara ary afaka miasa amin'izany.
Raha manapa-kevitra amin'ny taranja na seminera ianao dia tokony apetrakao ny daty hanombohany. Afaka miala amin'ny sigara ianao amin'ny andro handraisanao fanapahan-kevitra. Ny zavatra hafa rehetra dia resahina ao amin'ny vondrona. Manome fanampiana izany ary misy olona mitovy fisainana mahalala izay lazainy. Ny fanamarihana rehetra momba ny fitondran-tena mifoka dia tokony hosoratana.
Tsy nisy olona teraka mpifoka. Ny olona rehetra dia tsy mpifoka sigara ary raha te hahalala izany indray dia ilaina ny manamarika ireo fiovana tsara. Ny antony manosika ny hiala dia nitombo be. Angamba ianao te hampiasa ilay vola nangoninao mba hamatsiana vola fialan-tsasatra nandrasana hatry ny ela na hitondranao ny tenanao amin'ny zavatra mahafinaritra izay tsy afaka taloha. Angamba manapa-kevitra ny hanao bebe kokoa amin'ny fahasalamanao ianao ary manao fanatanjahan-tena mety aminao. Izany rehetra izany dia azo atao milamina kokoa amin'ny alàlan'ny tsy fifohana sigara.
Tokony misafidy fomba fialam-boly hafa ianao. Ireo izay mifoka sigara amin'ny toe-javatra mampihetsi-po dia matetika miverina amin'ny fotoana toy izany. Ireo sorona antsoina hoe slip na relapses dia tsy maintsy ialana amin'ny vidiny rehetra. Tokony hanelingelina tena amin'ny fotoana toy izany ny olona.
Toa mora daholo izany rehefa mamaky azy ianao. Ny fikirizana dia tanjaky ny toetra amam-panahy anaovan'ny tsirairay manaporofo ny tenany.
Ny fanirian'ireo mpifoka dia ny manipy sigara fotsiny fa tsy mandray indray. Faniriana ihany koa ny tsy hisian'ny soritr'aretina fisintahana. Io fiainana tsy mpifoka io dia hitranga manomboka izao. Mampalahelo fa tsy izany no izy. Saingy misy fomba maro isan-karazany ahafahan'ny soritr'aretina misintona ahena farany ambany mba hahafahan'ny tsirairay miaritra azy ireo. Na iza na iza dia afaka mijanona tsy mifoka sigara, na firy na firy sigara na na inona antony.
Ny teboka manan-danja indrindra amin'ny làlana hahatongavana tsy mpifoka dia ny fahazoana. Inona no mandalo ny vatana rehefa mijanona tsy mahazo nikôtinina? Ahoana no fomba hanehoana izany fisintahana izany? Ny fanavahana dia vita amin'ny fisintahana ara-batana sy ara-tsaina. Raha mijanona tsy mifoka ianao, dia tsy hita ireo zavatra mampiankin-doha ho an'ny hozatra sy ny psyche. Ny psyche dia mifamatotra mafy amin'ny vatana ary koa hiseho ny fisehoan-javatra ara-batana. Mp mpifoka sigara iray no mandrehitra sigara iray hafa nefa tsy fantany tsara ny antony mahatonga azy hifoka amin'izao fotoana izao.
Ny iray amin'ireo karazan-karazany ireo dia mety hiresaka afa-tsy amin'ny iray amin'ireo karazana mpifoka sigara. Ny iray kosa dia miaro ny tenany miaraka amin'ny voka-dratsiny mifanaraka aminy izay afaka mifandray amin'ny tontolo iainana iray manontolo. Ny toe-po ratsy, ny tsy fifandanjana, ny fahasosorana, ny fitaintainana ary ny tsy fitoniana amin'ny ankapobeny dia tsy azo fehezina. Ireo fisehoan-javatra ireo dia mitranga rehefa mihetsika amin'ny sehatra ara-tsaina fotsiny, fa tsy amin'ny sehatra ara-batana. Ny saina dia tsy maintsy milaza amin'ny vatana fa ny fialana dia zava-dehibe tokoa mba tsy hijaly ny fahasalamana.
Noho izany dia zava-dehibe ny fihenan'ny ambaratonga roa amin'ny fampitsaharana ny fifohana sigara. Ny fitsaboana kognitif amin'ny fitondran-tena, mety hipnosis ary teknika ara-tsaina mandaitra koa dia afaka manampy tsy ho mpifoka sigara haingana ary tsy hisintona. Ny fahafinaretana amin'ilay zavatra dia tsy tokony hatao ambanin-javatra eto, satria ny fahafinaretana dia mitondra antony manosika ary izay no zava-dehibe kokoa noho ny hatramin'izay.
Ny soritr'aretina fisintahana dia mihoatra noho ny kely indrindra noho io fifandraisan'ny psyche sy ny vatana io. Ny tahan'ny fahombiazana dia avo dia avo tokoa. Tsy azo antenaina ny fitomboan'ny lanjany lehibe satria tsapan'ny mpifoka fa amin'ny maha-mpifoka azy dia afaka manatsara zavatra betsaka amin'ny fiainany izy. Amin'ny alàlan'ny fanohanana marina ihany no ahafahana mamono ny voka-dratsin'ny fisintahana. Ny fihenan-danja dia mety hialana amin'ny fanazaran-tena. Sorohina araka izany ny fiovana amin'ny fiankinan-doha. Raha matanjaka ny finiavana dia afaka manomboka fiainana vaovao afaka herinandro vitsivitsy raha tsy misy soritr'aretina fisintahana na ara-batana.
Tokony hitady sy hahita ny fomba tsara indrindra ho an'ny tenany ny tsirairay. Misy safidy mihoatra ny ampy hisafidianana. Mila mandray ny dingana voalohany fotsiny ianao ary manana finiavana sy hery hiarahaba ilay hazo mamirapiratra mandrakizay.
Misy ihany koa ny hypnosis ankoatry ny fomba maro fialana amin'ny sigara, toy ny seminera, vondrona, fampianarana ary vokatra ara-pitsaboana toy ny siligaoma, plaster sns. Tsy ny rehetra no resy lahatra fa ny hypnosis dia afaka "mamono" ny fanirian'izy ireo hifoka. Na izany aza, voaporofo ara-tsiantifika fa mandaitra tokoa ny hypnosis. Na izany aza, zava-dehibe ny hahazoana antoka fa miditra an-tanana fotsiny ianao izay afaka manao hypnosis klinika voaporofo. Raha mino azy ianao ary manana finiavana mody amin'ny tsy fifohana sigara, dia azo antoka fa hahita fomba lavorary ianao.
Raha tena matanjaka ny finiavana hiala sigara, dia mety hijanona koa ny fifohana sigara aorian'ny fivoriana iray monja amin'ny hypnosis. Misy ny tatitra sy ny "marary" mitatitra an'io. Ny olombelona rehetra dia misy fahatsiarovan-tena sy tsy fahatsiarovan-tena. Te hampitsahatra ny fifohana sigara ny mahatsiaro tena ary io faniriana io dia tsy maintsy miditra amin'ny tsy fahatsiarovan-tena, izay mitranga amin'ny alàlan'ny hipnosis. Ny fahatsiarovan-tena dia milaza aminao hatrany fa manimba ny fifohana sigara ary vola am-polony no laniana amin'izany. Na inona na inona toetr'andro, mpifoka sigara mijoro eo amin'ny faritra fifohana sigara na eo anoloan'ny varavarana mba hahafahany maka puffs vitsivitsy.
Amin'ny maha mpifoka anao dia manaparitaka tena ianao amin'ny fepetra izay tsy ekenao ho tsy mpifoka. Matetika dia tsy mandeha ny fomban'ny finiavana, satria ny mpifoka sigara dia tsy misy akony firy amin'ny fifohana sigara na tsia. Misy antony sy toe-javatra maro samihafa izay mitarika ny sigara. Adin-tsaina any am-piasana. Ny sigara dia miala sasatra, miala sasatra. Na dia mahita vahaolana hafa aza, matetika dia sarotra ny miala amin'ny sigara.
Na izany aza, ny hypnosis dia tsy tokony ho eritreretina satria matetika ampiasaina amin'ny fampisehoana. Seho fotsiny iny. Hafa mihitsy ny fomba fitsaboana hypnosis amin'ny klinika ary hanova ny fiainan'ny mpifoka sigara rehetra izy ireo. Ny hypnosis klinika dia fizotran'ny fanasitranana ary noho izany dia tsy vitan'ny dokotera ihany ny manao hypnotist na psychotherapist naturopathic. Ny fankatoavana fitsaboana toy izany dia tokony haseho hatrany.
Ny fahazoanao miditra amin'ny fomba toy izany koa dia fepetra takiana amin'ny fahombiazana. Raha efa nanao fanandramana maro hiala amin'ny sigara ianao ary tsy nisy nety, hypnosis dia tena safidy hafa. Aorian'ny fotoam-pivoriana vitsivitsy, ny fiainan'ny mpifoka dia "hiova" ho an'ny olona tsy mpifoka, raha avelany ary resy lahatra izy fa tsy mahatanty sigara intsony ilay tsy mahatsiaro tena.
Ny dingana voalohany dia noraisina - nijanona tamin'ny sigara ianao ary mazava ho reharehanao ny fahombiazanao. Nila ezaka, hery ary herim-po be ny fandehanana tamin'ity lalana ity. Na inona na inona ny fomba nahitanao ny lalana mankany amin'ireo tsy mpifoka, ny tahan'ny famerenam-bidy dia indrisy fa avo dia avo foana. Tsy dia atahorana hiverina indray aorian'ny herinandro vitsivitsy amin'ny tsy fifohana sigara, fa koa rehefa afaka volana maro na taona maro aza dia mety hiseho ny faniriana sigara.
Ny avonavonao tamin'ny nahavitana azy io dia indrisy koa fa ny risika lehibe indrindra hanjary tsy miraharaha sy miditra amin'ireo toe-javatra tsy mety aminao ary manohana be ny fanirianao. Zava-dehibe noho izany ny fahafantaranao ireo loza mety hiteraka fihemorana eo am-piandohan'ny dianao ho lasa mpifoka sigara. Raha misy mahatsapa ireo toe-javatra ireo dia azo averina mifanohitra amin'izany izy ireo.
Misy ireo mpifoka taloha izay, rehefa afaka ny roa na telo taona tsy fitandremana, dia lasa mpifoka indray. Ny sigara sigara fotsiny ho an'ny fahafinaretana dia tsy tokony hatao ambanin-javatra ary tsy azo ampitahaina amin'ny mpifoka sigara indraindray. Ny sigara aorian'ny sakafo hariva, amin'ny lalao karatra na amin'ny disko dia fady ankehitriny ary tsy maintsy misy safidy hafa na fanelingelenana. Ny olana dia matetika tafiditra ao ny alikaola ary mitombo tsy refesi-mandidy ny tsy fitandremana.
Matetika ny mpifoka dia eo ihany koa mandritra ny fiaraha-mientana fialamboly, izay vao mainka mihasarotra ilay vao tsy mpifoka. Tsara fa raha ny toe-javatra ara-dalàna vaovao dia voarara ny fifohana sigara ao amin'ny trano fisakafoanana, disko ary tranom-panjakana. Manamora kokoa ny fanaovana sigara vaovao izany. Amin'ny maha-tsy mpifoka azy dia fady tanteraka ny mifoka sigara na sigara fotsiny. Avo loatra ny mety hitrangan'ny fiverenana. Tokony hotadidina ao an-tsaina ny tsy fitandremana. Ny namana manolotra sigara anao dia tsy mpinamana amin'ity tranga ity satria tsy manohana izy ireo.
Tena zava-dehibe koa ny fandotoana tena. Valio ny faharetanao na mitadiava safidy hafa rehefa lasa be loatra ny faniriana. Izay mitahiry ny vola voangona dia ho tsapany rehefa afaka herinandro vitsivitsy hoe ohatrinona no vola laniny tamin'ny fifohana sigara. Hafa ny zavatra hafa, toy ny fialan-tsasatra isan-taona na akanjo manokana. Azo antoka ny vola azo amin'izany. Saika tsy voafetra ny solony ary tokony hifidy izay sahaza azy manokana ny tsirairay. Ny seminera dia afaka manao asa tsara eto ary mampiseho fomba vaovao amin'ny tsy fifohana sigara.
Fiaraha-miasa - mandrosoa miaraka amin'ilay mpiara-miasa
Sauna Finnish - fahasalamana sy fahasalamana
Qi Gong | Fahasalamana sy fahasalamana
Matory tsara | FAHASALAMANA
Unterschied zwischen Viren und Bakterien - Gesundheit
Tsy fahampiana vy | FAHASALAMANA
Fanalefahana fanatanjahantena | Fitness sy fahasalamana
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 19. Desambra 2020 15. Jolay 2021 Sokajy fahasalamanaKeywords fahasalamana, ajanony ny sigara, setroka, mpifoka sigara, salama
indray Lahatsoratra taloha: Reptilien als Haustiere
more Lahatsoratra manaraka: Tsy misy fanaintainana amin'ny alàlan'ny fanorana | Wellness
Hevitra fanomezana lehibe ho an'ny reny ary fanomezana ho an'ny zazalahy kely
Zumba ao an-trano
Fianakaviana & fiaraha-miasa (10)
Fialam-boly & fialamboly (10)
Fanatanjahan-tena sy fanatanjahan-tena (10)